सप्तकोशी र काबेली विकासले बोलायो मर्जरको लागि विशेष सभा | गृहपृष्ठ
Home लगानी सप्तकोशी र काबेली विकासले बोलायो मर्जरको लागि विशेष सभा
on: March 26, 2019 लगानी
सप्तकोशी र काबेली विकासले बोलायो मर्जरको लागि विशेष सभा
चैत १२, काठमाडौं (अस) । काबेली विकास बैंक लिमिटेड र सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंक एक आपसमा मर्जरमा जानको लागि विशेष सभा बोलाएका छन् । यि दुई कम्पनीले चैत २७ गते छुटाछुटै ठाउँमा शेयरधनीहरुलाई बोलाएका छन् । काबेली विकासले होटल चिप एण्ड वेष्टको सभाहल, धनकुटामा सभा आयोजना गर्न लागेको छ भने सप्तकोशी डेभलपमेण्टले उद्योग संगठन मोरङ, विराटनगरमा बोलाएको छ ।
सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंक र काबेली विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने गाभिनेको लागि शेयर स्वाप रेशियो अनुपातमा छलफल तथा पारित गर्ने विषय कम्पनीहरुको रहेको छ । विशेष सभाले मर्जर सम्बन्धमा भएका सम्झौता तथा निर्णयलाई अन्तिम स्विकृति दिनेछ ।
मर्जर कार्यका लागि भएको अन्तिम सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको मनोनयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने । मर्जर प्रक्रियाको लागि माघ ४ गतेदेखि एकिकृत कारोबार नभएसम्मको लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द रहेको छ । विशेष सभाको लागि माघ ३ गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म शेयर स्वामित्व भएका शेयरधनीहरुले कम्पनीहरुको सभामा भाग लिन पाउनेछन् ।
काबेली विकास बैंकको विशेष साधारण सभाबाट निर्णय भएको हकप्रद जारी गर्ने निर्णय खारेज गर्ने सम्बन्धमा सभामा छलफल रहेको छ ।
चालू आवको ९ महीनामा सप्तकोशी डेभलपमेन्टले कति उठायो खराब कर्जा ?
काबेली विकास बैंकले ८१% बढी नाफा कमायो, सप्तकोशी डेभलपमेन्टसँग मर्जमा जान लागेको कम्पनीको चुक्तापूँजी कति ?
तीन कम्पनीको विशेष साधारण सभा बुधवार
सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकको नगद लाभांश वितरण